Ezigbo njem njem njem na India - Kpọọ 91-993.702.7574
Ezigbo njem nchịkọta njem ezumike n'India, Dịka Ọmarịcha Ala India
India bu ala di omimi na ala omimi nke juputara n'akwukwo banyere okpukpere chi na omenala, ihe mara mma nke ndi mara mma, ihe di ebube nke ndi ochie, na ndi mmadu nke oge a. Ndị ọbịa si gburugburu ụwa na-abanye India ka ha nwee ahụmahụ pụrụ iche na n'akụkọ ihe mere eme ya. Ma ọ bụ maka njem nlekọta okpukpe, iji hụ ihe ndị a na-enweghị atụ, ma ọ bụ iji mee onwe gị baptizim na omenala na akụkọ ihe mere eme nke obodo a dị ịtụnanya, ndị nleta na ndị ezumike na-enwe obi ụtọ maka njem ha na-arụ ọrụ na njem nlekọta ahụmahụ Akpụkpọ ụkwụ Pebbles Sand.
Sand Pebbles Tours bụ otu n'ime ụlọ ọrụ na-eme njem nleta kachasị mma na India na-enye ọmarịcha njem njem ezumike na njem nlegharị anya India na mpaghara ọ bụla na mpaghara mpaghara a dị ịtụnanya. Ụlọ ọrụ njem na-emeri nke ọma na-enye ohere dịgasị iche iche nke njegharị na-enyocha akụkụ nile nke mpaghara dịgasị iche iche na steeti, ọtụtụ n'ime ha na-egosipụta ụfọdụ atụmatụ ma ọ bụ saịtị maka ndị nwere mmasị pụrụ iche na mpaghara ndị ahụ.
Site na Bhitarkanika jungle ntụrụndụ na ụgbọ mmiri ụgbọ mmiri na njem eco-wildlife, ụlọ ọrụ ahụmahụ nke ukwuu nwere ihe ịga nke ọma njem nleta iji izute ọchịchọ na mmasị nke ọ bụla njem. Họpụtara n'etiti ihe ndị a dị ịtụnanya na-esonụ maka ahụmahụ pụrụ iche pụrụ iche na-eme njem n'ebe ọ bụla na mba ahụ. Ụfọdụ n'ime ụlọ ọrụ kachasị nchịkọta njem ndị a na-ewu ewu -agụnye:
Njem nchịkọta Shimla Manali
Goa njem na nchịkọta ezumike
Ihe nchịkọta Ooty
Naanị njem nke Odisha
Nchịkọta Kerala Evergreen
Njem nke Darjeeling Hill
Ọchịchị Royal Rajasthan
Gaa na njem ndị njem njem
A na-enyocha ebe ndị India na-emekarị nke ọma site na mpaghara, dabere na ọdịmma nke otu. Ógbè India ọ bụla nwere ọdịbendị pụrụ iche, ọdịnala, akụkọ ihe mere eme na ịma mma mara mma nke na-adọta ndị ọbịa si gburugburu ụwa. Ngwá Ọrụ Na-ahụ Maka Ájá Peeji na-enye ụfọdụ nlekọta njem na India iji nyochaa mpaghara na ógbè dị iche iche nke obodo a dị ịtụnanya gụnyere:
North India - na-enye obodo nta mara mma na ebe okpukpe dị iche iche n'ụlọ arụsị oge ochie, ọdọ mmiri ọdọ mmiri, na nnukwu mmiri mmiri
N'India India - ebe etiti ebe otutu ndi eze oge ochie, East India na-enye ihe ngosi akara ngosi, ulo di iche iche di egwu,
North East India - nke kachasị nchọpụta na mpaghara kasị dị omimi nke dị na ala Ugwu Himalaya
West India - Ọgaranya n'akụkọ ihe mere eme, ọnọdụ ime mmụọ, na ọdịbendị, West India jikọtara ịma mma mara mma nke nwere ọdịbendị na ebe okpukpe
South India - na-egosi ụfọdụ n'ime ihe ndị mara mma na ịma mma oge ochie
Central India - ụlọ nke ọtụtụ ebe anụ ọhịa, ogige ntụrụndụ mba, mpaghara agbụrụ, na ebe ndị njem oge ochie
A na-arara aja nlekọta akpụkpọ ụkwụ na-eduzi nlekọta njem njem ezumike na ezigbo ụgwọ ezumike na nlegharị anya ahaziri iche iche na India. Enweghi uzo di nma karia ijeghari n'ime ime obodo, na-emikpu n'ime akwukwo ihe omuma na omenala nke mpaghara, ma nwee ihe mara mma nke ala a di nma karia karia onye ozo nke kachasi anya na ndi ozo.
Na-ekpochi ntụrụndụ nke Raja na Odisha na ego ndị pụrụ iche Site na Sand Pebbles Tour N Njem